Maamulka Hargaysa oo xabsi ku xukumay dad reer Ogadenya ah
Gumaysiga Itoobiya oo cadaadis ba,an ku haya shacabka Ogadenya.
Madax sare oo itoobiyaan ah oo kasoo horjeeday barnaamijka dib u dajinta ee Itoobiya oo shaqadii laga eryay.
5 Kilil oo diiday miisaaniyadii ay Itoobiya sanadkan u qoondaysay.
Qaramada Midoobay Oo Qoraal Digniin Ah Gaadhsiiyey Itoobiya.
Waraysi aanu la yeelanay Xoghayaha guud ee Jabhadda wadaniga xoraynta Ogaadeenya iyo arimo kale oo mihiim ah.
Maamulka Hargaysa oo xabsi ku xukumay dad reer Ogadenya ah.
Maamulka qabiiliga ah ee ka taliya magaalada Hargaysa iyo tuulooyinka ku hareeraysan, ayaa talaadadii ay bishan Jun 15ka ahayd sheegay inuu xabsi ku xukumay soddon ka mid ah dad rayad ah oo u dhashay dalka Ogadenya, kuwaasoo muddo dheer lagu hayay xabsiyada Hargaysa.
Dadkan rayadka ah ee xabsiga dulmiga ah lagu xukumay waxaa maxkamad ku-sheeg ku taalla magaalada Hargaysa la keenay aroornimadii talaadada ahayd, iyagoo uu dhafoorkoodu aad u liitay, isla markaana ay dhibaato iyo rafaad aad u badani ka muuqatay.
Maxkamad ku-sheegtaas ayaa muddo aad u gaaban ka dib ku dhawaaqday xukunkii uu kula soo dardaarmay maamulka bani’aadamnimada ka arradan ee ka taliya magaalada Hargaysa.
5 ka mid ah maxaabiistaas xaq-darrada lagu haystay waxaa lagu xukumay min 5 sano oo xadhig ah. 25 kalana waxaa midkiiba lagu xukumay 3 sano oo xadhig ah. Waxaa maxaabiistaas maxkamad ku-sheegta la hor-keenay magiciisa laga waayay nin ka mid ahaa dadkaas xabsiga lagu hayay, kaasoo la filayo in maamulka Hargaysa uu gacanta u geliyay gumaysiga Itoobiya.
Maamulka Hargaysa ayaa dhibaatooyin kala duwan soo gaadhsiiya dadwaynaha rayadka ah ee Ogadenya u dhashay ee socotoda ku yimaada magaalooyinka Woqooyi Galbeed/ Soomaaliya. Wuxuu maamulkaasi marar badan xabsiga dhigay dadwayne aan waxba galabsanin, wuxuu sidoo kale taliska Addis Ababa marar kala duwan u dhiibay dad rayad ah.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa Ogaadeenya keentay ciidamo farabadan oo ay ugu tala gashay inay dadka Ogaadeenya cadaadiska iyo xasuuqa ku sii kordhiyaan. Ciidamadan ayaa horraantii bishan billaabay inay cagta mariyaan dadka shacabka ah ee tuulooyinka iyo magaalooyinka ku nool iyo waliba kuwa ay meelaha miyiga ah kula kulmaan, waxayna dil, kufsi, boob hanti iyo jidhdilba u gaysteen dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Dhibaatooyinkii ugu danbeeyay ee ciidamadaasi ay dadka rayadka u gaysteen waxaa ka mid ahaa:
01/06/04 meesha la yidhaahdo Odo oo Jigjiga agteeda ah waxay ku kufsadeen 17 haween ah. Dumarkaas la kufsaday waxaa la keenay Isbitaalka magaalada Jigjiga. Waxay sidoo kale Ciidamada cadowga Itoobiya jidhdil ba’an u gaysteen 8 nin oo joogay tuulada dumarkaas lagu kufsaday, ilaa iyo haddana lama garanayo meesha ay nimankaasi ku denbeeyeen.
Sidoo kale Ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa ugu yaraan 15 qof oo rayad ah ku laayay meel aan sidaas uga fogayn tuulada Uubataale, waxay kaloo halkaas ku dhaawaceen 22 qof, ka dib markii ay rasaas oodda kaga qaadeen baabuur rakaab ah oo halkaas marayay. Dad goob-joog ah oo u waramay Wakaalada Wararka Ogadenya ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay si fiican u arkayeen in baabuurku uu yahay baabuur shibil ah oo wada rakaab caadi ah, isla markaana aan samaynin wax lagaga shakiyi karo, balse ay si ula kac ah u xabbadeeyeen.
Tuulada Miir-Khaliif oo aan sidaas uga fogayn meesha ay dadka shacabka ah ku laayeen ayaa waxaa dhawaan ka dhacay dagaal sokeeye oo ay iskaga horyimaadeen laba beelood, kaasoo khasaare wayn gaystay, waxaana si fiican loo garwaaqsan yahay in dagaalkaas ay xukuumadda Itoobiya ka dambayso, doonaysana inay iska hor-keento dadwaynaha soomeeliyeed ee deegaankaas wada-dega. [0o[o
05/06/04 magaalada Qabridaharre waxaa lagu xidhxidhay dad badan oo ay ka mid ahaayeen. Cabdi Budul Biixi, Deeq Biixi Xaashi iyo Xirsi Fidhiq Oogle.
06/06/04, magaalada Dusmo dad badan oo lagu xidhxidhay waxaa ka mid ahaa:
Buraale Shafeec, Laba-Suul Aadan, Axmed Doolaal, Ibrahim Mahad Shariif Cabdi, Dheeh Maxamed Goohe iyo Aamina Maxamed.
Isla taariikhdaas (06/06/04) meel la yidhaahdo Adhisaley oo Gobolka Nogob ka tirsan dad dagganaa ayay ciidamada gumaysiga Itoobiya ku ganaaxeen ruuxiiba 500 oo Bir. Magacyada dadka la ganaaxayna waxay kala yihiin.
1- Siyaad Cusmaan 2. Cabdhi Mukhtar Qaasim 3.Yusuf Garane iyo 4. Kuusow.
06/06/04 Hadhaawe oo Godey ka tirsan waxay cadowgu ku kufsadeen gabdh yar oo 14 jir oo agoon ah, taasoo lagu magacaabo Wacdiya Maxamed Caydiid. Kadibna Wacdiya waxay u dhimatay dhaawicii kufsigaas ka soo gaadhay.
08/06/04 magaalada Dhagaxbuur duleedkeeda 8 gabdhood ayey ku kufseen ciidanka
gumeysiga Itoobiya. Siddeedan gabdhood hadda waxay yaallaan Isbitaalka Dhagaxbuur iyagoo aad il-daran.
Ilaa iyo billowgii bisha dadka lagu xidhxidhay magaalada Godey waxay kor u dhaafayaan 160 qof.
Dhinaca kale tuulooyin ay ka mid yihiin Daara-salaam iyo Dhuxun oo Gobolka Nogbeed ka tirsan waxaa middiiba lagu ganaaxday 1000 bir. Caddaadiska xad-dhaafka ah ee taliska Addis Ababa uu ku hayo dadwaynaha rayadka ah ee Ogadenya waxaa ka mid ah iyadoo dadwaynaha amar lagu siiyay inayna tuulooyinka iyo magaalooyinka uga fogaanin meel hal saac loo codo. Waxaa dadwaynaha la gaadhsiiyay in reerkii dega meel ka durugsan tuulada ama magaalada lagu tirinayo inuu taageere u yahay jabhadda, isla markaana tallaabo laga qaadayo. Waxaa kaloo cadaadiskan ka mid ah iyadoo dadwaynaha ku dhaqan tuulooyinka iyo magaalooyinka aan loo oggolayn inuu isu socdaan habeenkii wixii toddobada fiidnimo ka denbeeya.
Madax sare oo Itoobiyaan ah oo kasoo horjeeday barnaamijka dib u dajinta ee Itoobiya oo shaqadii laga eryay
Madax itoobiyaan oo ka soo horjeeday barnaamijka dib u-dejinta ee xukuumadda Itoobiya ay ka wado meelaha qaarkood ayaa shaqadoodii laga eryay, waxaana madaxdaas ka mid ah Mr. Abu Yidhaata, oo ka tirsanaa golaha dhexe ee ururka OPDO, oo ah urur isku sheega inuu matalo qowmiyada Oromada, hase yeeshee daba-dhilif u ah ururka TPLF.
Abu Yidhaata wuxuu ka mid ahaa masuuliyiinta dib u-dajinta iyo daryeelka dadwaynaha ee kililka Oromada. Abu Yidhaata wuxuu sheegay in ayna macquul ahayn in la hirgaliyo barnaamijka dib u-dajinta ee dawlada Itoobiya ay wado, wuxuna barnaamijkaas ku tilmaamay mid aan si fiican loo soo qorshaynin, isla markaana si wayn looga soo baaraan-dagin.
”Dawladu waxay rabtaa sidii ay siyaasadeeda u hirgelin lahayd oo kaliya, balse kama fakirayso danta dadwaynaha”.sidaasna waxaa yidhi Abu yidhaata.
Addis Ababa June 17 ONA: - Wariyaha wakaalada wararka Ogadeniya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in ay diideen 5 kilil misaaniyadii ay dawlada Itoobiya sanadkan u qoondaysay. Shantan kilil ayaa waxay kala yihiin Kililka Herarida, Kilika Benishangul, Kililka Canfarta, Kililka Gambella iyo weliba Kililka Tigreega.
Waxay masuuliyiinta kililadani saluugeen sida ay dawlada Itoobiya wax u qoondaysay, waxayna intaa raaciyeen in ayna horumar iyo nabadgalyo keeni Karin sidan haddii ay wax ku socdaan. Kililadaas ayaa dawlada Itoobiya ka codsaday in ay dib u fiiriso sida ay dawladu wax u qoondaysay oo ah mid aan macquul ahayn kana soo hor jeeda in wax laga qabto adeegyada guud ee bulshada.
War aanu kasoo xiganay shabakada internetka ee Goobjoognet ayaa sheegaya in qoraal ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay 13kii bishan June la gaadhsiiyay maamulka dawlada Itoobiya kaasoo looga digayo Itoobiya faragelin ay ku hayso gudaha Soomaliya.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midawday ayaa dawlada Itoobiya ku wargeliyey in aysan ciidamadoodu faragelinta ku samaynin gudaha Soomalaiya isla markaana ay joojiyaan hub ka soo gala wadankeeda Soomalaiya.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh radio Xoriyo
Faafin: SomaliTalk.com June 19, 2004